कांग्रेसको मान्यता र सिद्धान्त करेक्सन गर्न आवश्यक छ
सम्पादकीय नाेट :१४ औँ महाधिवेशनको काउन्टडाउन सुरु हुँदै गर्दा यतिबेला नेपाली कांग्रेसभित्र राजनीतिक सरगर्मी बढेको छ । पार्टी सभापतिदेखि केन्द्रीय समिति, प्रदेश, जिल्ला हुँदै वडास्तरसम्म यतिबेला कांग्रेसलाई महाधिवेशनले छोपेको छ ।
फरकधारको यो शृंखलामा हामीले कांग्रेसका जिल्ला सभापतिहरुसँग महाधिवेशनपछिको कांग्रेस कस्तो हुनुपर्छ ? र, युवा नेतृत्वको सम्भावना के छ ? भनी सोध्ने छौँ । यसै क्रममा नेपाली कांग्रेस तनहुँ​​का सभापति वैकुण्ठनाथ न्यौपाने​लाई हामीले यो शृंखलामा प्रस्तुत गरेका छौँ । )
नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन गर्नैपर्ने बाध्यतामा छौँ । जिल्लाबाट हामीले सुझाब दिने कुरा कांग्रेसमा सुधार आवश्यक छ भन्ने हो । यो अधिवेशन पुराना, परिपक्व र युवाहरुलाई प्रोत्साहित गर्नेभन्दा पनि सत्तामुखी हुँदै गएको स्थिति हामी देख्छौँ । अहिले नेतृत्वले यसलाई चिरेर अघि जानसक्ने भएन । समग्र तनहुँले अहिले त्यसलाई चिरेर नयाँ नेतृत्वको खोजी गरिरहेको छ ।
पुरानो खट्टे खाएका र अनुभवी नेतालाई अन्डरमाइन्ड गरेर युवा मात्र भन्न हुँदैन । युवाहरुको पनि परीक्षण हुँदै छ । अब पाका पुराना मान्छे र युवाको पनि सम्मिश्रणबाट नेतृत्व चयन हुनुपर्छ । कांग्रेसभित्रको राजनीतिक चरित्र पहिल्यैदेखि नै यही ढंगको हुँदै आएको छ ।
पुराना मान्छेको पनि सम्मान गर्नुपर्यो, बीचमा एउटा लेयर हुनुहुन्छ । एक किसिमले भन्दा ७५ काटेका नेता हुनुहुन्छ । ६५ एभरेजका पनि हुनुहुन्छ । उहाँहरुको उमेरभन्दा पनि स्पिरिटलाई ध्यान दिनुपर्छ ।
पार्टीमा परिवारवादको प्रयास रहेको देखिन्छ । गिरिजाबाबुहरु हुँदा हाइटको नेतृत्वमा हुनुहुन्थ्यो । उहाँलाई स्वीकार गरिएको हो । अहिले शेरबहादुरजी उहाँको त्याग र तपस्याको सहभागिताले हुनुभएको हो । अहिले रामचन्द्र दाइ प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ ।
हिजो संस्थापक नेतृत्वमा हुनुभएका नेताहरुका छोराछोरीको केही सहभागिता देखिएको छ । उहाँहरु पनि राजनीतिमा बलियो हुनुहुन्छ । उहाँहरुले पनि पार्टीमा लगानी गर्नुभएको नै छ । यसलाई परिवारवादसँगै नजोडौँ ।
नेपाली कांग्रेस एउटा लोकतान्त्रिक पार्टी हो । यो पार्टीको इतिहासलाई हेर्दै गर्दा यसका पक्ष र विपक्षमा कुरा हुन्छन् । हिजोका दिन कठोर थिए, कानुनको व्यवस्था थिएन, अदालतले भनेको काम गर्न नपाउने अवस्था थियो त्यतिबेला कांग्रेसलाई यो स्थितिमा ल्याउन उहाँहरुको ठूलो योगदान छ । अहिले प्रतिस्पर्धामा अरु पार्टी पनि छन् ।
अरुले पनि लोकतन्त्र मानेका छन् । लोकतन्त्र मानेको भनिरहेका छन् । यद्यपि, नियतमा लोकतन्त्रमाथिको विश्वास र मूल्यमान्यता रहेनछ भन्ने उहाँहरुको पछिल्लो व्यवहारबाट देखियो । दुईतिहाइ झण्डै भएको सरकारमा अधिनायकवादी चिन्तन देखियो । अरु पार्टीमा पनि त्यस्तो देखियो ।
कांग्रेसलाई कमजोर बनाउने प्रयत्नमा परिवारवाद हावी भयो वा युवाहरुले स्थान पाएनन् भन्ने खालका विषय आइरहेका छन् । लोकतन्त्रलाई कमजोर गर्ने प्रवृत्ति यहाँ देखिन्छ । त्यसबाट जोगिँदै पार्टीको मुख्य लक्ष्य संविधानवादका आधारभूत मूल्य, चिन्तनमा अगाडि बढेको हिजोको इतिहास जुन छ, ती सबै आधारलाई हेर्दा कांग्रेसलाई दोष दिनुपर्ने अवस्था छैन । तर, यसमा सुधार गर्नुपर्छ ।
अहिले धेरै भातृसंस्थाको निर्वाचन हुन सकेको छैन । अहिलेको नेतृत्वले विभाग तोके पनि भ्रातृसंस्थाहरु निष्क्रिय भए । कार्यशैलीमा सुधार भने जरुरी छ । पार्टीको मूल्य मान्यता जुन ढंगले स्थापित भएको हो, त्यो भने भएन । कांग्रेसको मूल्य मान्यता र सिद्धान्त ठिक ठाउँमा छ, यसलाई केही करेक्सन गर्न जरुरी छ । जसका लागि परिवर्तित नेतृत्व होस् । जहाँ युवाहरु पनि होऊन् र पाका नेतृत्वलाई पनि सम्मानपूर्वक लिएर जान सकियोस् ।
विधानले प्रस्ट लेखेको छ, वडाको सिफारिस र क्षेत्रको सिफारिस जिल्लाले गर्ने भनेर । त्यो आधारलाई छाडेर आफूखुसी हुन हुँदैन् । यो अनलाइन व्यवस्था केही व्यवस्थित होला भनेको झनै भद्रगोल बनिरहेको छ । यो अव्यवस्थित र बर्बाद भएर अराजकताको अर्को जड बनेको छ ।
महाधिवेशन प्रतिनिधि भइसकेका मान्छे पनि कसैले बीचमै नाम काटिदिएर क्रियाशीलताबाट वञ्चित भएको अवस्था छ । अहिलेसम्म सदस्यताको नामावली प्रकाशन भएको छैन । अहिलेको नेतृत्व तहले विश्वसनीयता बढाउँदै अघि बढ्नुपर्छ । पार्टीको मूल्य मान्यताका आधारमा कार्यशैलीमा विश्वसनीयता भएन ।
जहाँ पनि अवसर, धाँधली र तलमाथि गरिदिने भइदियो । त्यो राम्रो होइन । विचार भिन्न–भिन्न हुन सक्छन्, लोकतान्त्रिक पार्टीभित्र विचार फरक आउनु स्वाभाविक हो । तर, अहिले क्रियाशील सदस्यतामा पक्ष–विपक्षमा धाँधली हुँदा गाउँका नेता कार्यकर्ता निरास बन्दै गइरहेका छन् । यतिबेला नेतृत्व गम्भीर बन्नुपर्ने बेला छ ।
प्रकाशित मिति : भदौ ३, २०७८ बिहीबार २०:२०:३३,